1. Ọ Formats
2. Melite Chromecast
3. Stream Video si Devices
4. Stream Obodo Files
5. Ọ égwu
6. gụgharia Media Players
7. Atụmatụ na usoro
Isiokwu a tụnyere ise n'elu gụgharia media egwuregwu. Dị na-agụ site isiokwu na-esi gị kasị mma media egwuregwu.
Roku bụ a gụgharia mgbasa ozi ọkpụkpọ na-eme ka ọ dị mfe ịnweta ihe nkiri, egwuregwu, music, TV na-egosi na ndị ọzọ na ọdịnaya na TV. Free ọwa na ha ọtụtụ narị na-nyere gụnyere ndenye aha ọrụ ndị dị ka Hulu Plus na Netflix mgbe àjà a adaba n'ụzọ nke ịzụ ma ọ bụ renting a na-ewu ewu ma ọ bụ mmasị show ma ọ bụ fim na Redbox, VUDU na Amazon ngwa ngwa Video.
Ihe ị ga-amasị
Ọ bụrụ na ị a USB subscriber, Roku-enye gị ohere na-ekiri na-ina fim na mmasị originals si dị iche iche ọrụ ndị dị ka History ọwa, A & E, Fox Ugbu a, Watch Disney, Watch ESPN, Showtime n'oge ọ bụla na HBO laa.
Iji Roku Player adịghị abịa na zoro ezo akwụ ụgwọ dị ka ugboro ugboro ụgwọ.
E nweghị kwa ọnwa na ndenye aha dị ka onye ọrụ na-nyere ohere iji kwụọ ọdịnaya nke oke.
The mgbasa ozi ọkpụkpọ-ejikọ na TV kpọmkwem gụnyere elu-ọsọ internet ọrụ Iji site n'ụlọ netwọk na ojiji.
Ha na-eduzi Walkthrough, ọ bụla nzọụkwụ dị mfe-eso na efu tech support chọrọ.
Bụrụ na ị nwere okenye TV nlereanya, Roku ana achi achi i nwere ike na-ele gị ọdịnaya site na nyere RCA ọdịyo na video mmepụta.
Digital TV ọrụ nke Roku site HDMI mmepụta enwe a elu àgwà na-eji ire ụtọ ọdịyo na video fiidi.
Ihe i nwere ike na-amasị
Roku nwere nnukwu ọdịnaya katalọgụ, ma ụfọdụ nke ụlọ ọrụ na-enye ya dị ka ndụ egwuregwu na music ọwa ịchọ ugwo memberships.
Ọzọ, ọrụ na .avi video ọdịnaya ga-ahụ Roku xd / S enweghị ike kpọọ ya.
Ọrụ na okenye TV nsụgharị iji RCA ọdịyo na video njikọ nwere ịgba mgba a dobe na ọdịyo na video àgwà, nke bụ n'ihi Roku ma RCA technology.
Site Apple TV ị nwere ohere ka enuba nile di iche iche nke video ọdịnaya na iTunes Store nri jidesie a elu-definition TV. Services akwado agụnye Netflix, MLB TV, HBO Go, Hulu Plus, iTunes Radio, ndụ TV n'ikike nke Disney xd na Disney ọwa gbakwunyere Vevo si ọtụtụ puku HD music videos.
Site na airplay mirroring, ị na-enwe ike enuba Web video n'ime gị Apple TV, karịsịa ndị na na ọhụrụ Mac on Mountain odum.
Onye ọrụ interface nke Apple TV e lauded dị ka otu n'ime a obiọma.
Apple TV pụrụ ịbụ ntakịrị n'azụ Roku, ma ọ bụ a gụgharia igbe na magburu onwe atụmatụ, ihe ma ọ bụrụ na i nwere ụfọdụ ahụhụ na Apple ụwa.
Roku 3, ya isi osompi yiri ka-enye ndị ọzọ na isi mmalite maka ọdịnaya dị ka Amazon ngwa ngwa, gụnyere ndị ọzọ na atụmatụ dị ka ime enwekwukwa na a headphone Jack gbakwunyere a cross-ikpo okwu search.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị na ngwaọrụ ndị ọzọ si Apple, Apple TV nwere ike ghara ịbụ ihe ndị magburu onwe streamer igbe dị na ya.
Na WD TV Live, i nwere ohere na-egwu dị nnọọ banyere ụdị ọ bụla nke faịlụ si n'ebe. File formats akwado agụnye VOB / ISO, AVI, MOV, MKV na ndị ọzọ na a TV. E nwekwara ọtụtụ ndị isi mmalite i nwere ike iji enuba ọdịnaya mgbe iyi mgbasa ozi na-echekwara na netwọk mbanye, USB ngwaọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla PC n'ime a kpọmkwem na netwọk. E nwere nza nke oké ntụrụndụ iji strimụ, dị ka ọtụtụ puku nke àgwà fim, trending videos, na tiivi nakwa na top music. Otu ihe na-eme ka WD TV Live ka standout bụ eziokwu na i nwere ike ịgbanwe gị Smartphone n'ime a definitive ime akara site na WD TV Ime ngwa.
WD TV Live ana achi achi ị nwere nnukwu n'usoro nke dakọtara codecs, a ibu nchekwa na ndakọrịta na 3D.
Ị ga-amasị ya kọmpat size, ngwangwa mmalite-elu, magburu onwe video na ọdịyo àgwà, onscreen menu mfe ịghọta na-agụ, gụnyere mfe ịnweta Home Network na Internet dabeere ọdịnaya gbakwunyere a keyboard USB nkwụnye na nhọrọ maka data ntinye handiness.
WD TV Live adịghị nwere kaadị agụ eweta, onye ọrụ interface bụghị bụla nso Apple TV na e nweghị na-wuru Wi-Fi.
Ọ bụkwa enweghị ike na-egwu a ọnụ ọgụgụ nke cop-echebe faịlụ na adịghị enwe onye Amazon ngwa ngwa Video ohere.
Ebe ọ bụ na ngwa ime akara bụ na o siri backlit, ọ bụghị usable na a darker gburugburu.
Ma Xbox 360 na ị nwere bụ ndị ọhụrụ ma ọ bụ okenye nlereanya, ị nwere ngwaọrụ emejuputara gbanwee site a gadget bụ n'ihi na egwu egwuregwu, gụnyere a nhọrọ nke sara mbara online ọdịnaya, media ehiwe ndị zuru ezu-apụta ntụrụndụ. Microsoft ka touted ọhụrụ dashboard imewe nke Xbox 360 dị ka ọdịnihu nke Television ka o doo anya na ụlọ ọrụ na-emegharị ahụ n'ofè Ịgba Cha Cha console na Xbox site enwogha ya n'ime a n'ụlọ ụtọ igbe na-egwu ya edekọ dị ka otu n'ime ya ọtụtụ magburu onwe atụmatụ.
The Xbox360 imewe bụ nnọọ pụrụ iche, mgbe ndị gadget bụ jụụ na-na-wuru Wi-Fi, aka buttons na Xbox Live.
Ị gaghị achọ ka igbe enweghị a HDMI USB na eziokwu na egwuregwu discs ka na-mangled.
Ọ na-eme ka eji a diski tree, ọ dịghị Blu-ray na e nwere onye na mpụga ike brik.
Site na PlayStation 3 console, ọ bụ omume na jikọọ music na video ọrụ ma na-ekiri ihe niile i nwere mmasị na. Video ọrụ ngwa ndị free download na My ọwa ngalaba n'okpuru Video na TV ọrụ. Nbudata Music Unlimited bụkwa ekwe omume mgbe n'otu oge nkwanye ọdịnaya si dị iche iche, ndị dị ka Crunchyroll, Epix, YuppTV, VidZone, Gaiam TV, TuneIn Radio, Redbox, NBA, Game Time, Qello, Sen Live ihe, WWE Network, HBO na-aga, DailyBurn, Crackle, Vudu, Hulu Plus, MLB TV, NHL, Net Flix, Amazon ngwa ngwa Video na YouTube.
All Kacha ọhụrụ ibu-ebughibu PlayStation 3S na-enwekwukwa na yiri ọdụ ụgbọ mmiri dị ka ebughibu nsụgharị nke gadget, nke na-agụnye video akụrụngwa ihu, n'ihu USB ọdụ ụgbọ mmiri, Ethernet na SPDIF ngwa anya ọdịyo.
Ị ga-dị ka SSD nchekwa ọzọ, magburu onwe media ike, obere akụkụ na eziokwu na nke ahụ bụ ihe kasị mma maka a ọhụrụ ahụ bịaranụ na nkwanye media.
Ọ bụ nnọọ na-akụda mmụọ ebe ọ bụ na HDMI USB adịghị abịa na igbe mgbe mputa bụ agha, a obere oké ọnụ ọbụna dị ka mbanye usoro bụ obere ọnụ ala.
Isiokwu atụnyere ise Top gụgharia Media Players
HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri
Play Music site na kọmputa
Ọ dịghị Ee Ee Ee Ọ dịghị
Play Videos site na kọmputa
Ọ dịghị Ọ dịghị Ee Ee Ee
Ọ Atụmatụ na usoro: 10 Creative Ụzọ iji ya
Stream ọdịnaya site PC ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka Chromecast
Top 10 Kid Music Videos Your Children nwere ike ịmụta n'aka
Video Player si Tinye-ons / Ikwunye-ins
Olee otú iji tọghata PowerPoint 2007 ka Video
> Resource> Video> atụnyere Best gụgharia Media Players